GTT International - Genève: Fanambarana avy amin’ny Gadra politika
Fanambarana avy amin’ny Gadra politika
Mizotra any amin’ny làlan’ny fahaverezana i Madagasikara ary vonoina tsikelikely ny Malagasy.
Very tanteraka ny SOATOAVINA maha-Malagasy dia ny « FIHAVANANA », fifandrafesana no misy eo amin’ny samy vahoaka “zanak’ity Nosy ity”, izay anjakan’ny :
Izany rehetra izany no mahatonga fizirizirina. Koa ankehitriny dia mihenjan-droa ny tady, zary fahafaham-baraka no mahazo ny Firenena Malagasy. Hita taratra amin’izany ny zava-misy hatrizay fa lainga avokoa no afahana ny vahoaka : fandàvana ny fifanekena sy ny fifanarahana efa vita sonia, tsy ilaza isika afa-tsy ny “Tondrozotra”, mahamenatra!
Mbola namafisina izany fomba ratsy feno fahafaham-baraka izany tamin’ny kabary natao teny Iavoloha tamin’ny 09 janoary 2013 raha sahy nilaza ny mpitondra ankehitriny fa “milamina eto amin-tsika ary tsy ilaina ny fifandraisana amin’ny fianakaviam-be irasam-pirenena”. Fahajambana ve hoy izahay sa toetran-jiolahimboto ka tsy miraharaha ny fiainam-bahoaka no anton’izany rehetra izany ?
Tsy araky ny nandrasan’ny vahoaka ny kabary nataon’ny filohan’ny Tetezamita teo Iavoloha iny fa tora-po ara-politika miendrika fifandirana.
- Avy aiza marina ny fiavian’ny vola nanaovana ireo foto-drafitr’asa ireo ?
- Tsy fantatry ny CT, ny CST ary ny governemanta akory ny niaviany.
- Ny vahoaka dia miaina tanteraka ao anatin’ny tsy fisiana, zara raha mihinana, ny tsy fandriam-pahalemana efa tsy lazaina intsony na ambanivohitra na an-drenivohitra.
- Tsy andraikitry ny tetezamita ny fanaovana foto-drafitr’asa toy izao. Ny famoahana ny Firenena amin’ny alàlan’ny fifidianana mangarahara (Filoha sy solombavam-bahoaka) izay hitondra ho any amin’ny Repoblika vaovao no tokony imasoany.
- Mazava loatra fa izao zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny izao dia midika ho famonoana ny vahoaka Malagasy.
Mahita vola hanaovana foto-drafitr’asa “manara-penitra” izay “hanara-penitra” ihany koa ny sarany hidirana amin’izany.
Ho an’iza izany ? Tsy ny hoavin’ny sarambabem-bahoaka velively, fa ho an’ireo manana tombotsoa amin’izao fitondrana izao.
- Miha-mahantra andro aman’alina ny vahoaka Malagasy.
- Mitombo andro aman’alina ny harenan’ireo eo amin’ny fitondrana, izany indrindra no maha-saropiaro azy ireo ankehitriny mba hiarovany ny tombotsoany manokana.
Izay milaza ny marina ka manelingelina dia gadraina avokoa.
- Tambazana mariboninahitra (Grade) ny miaramila hampaharitra ny fitondrana misy ankehitriny, ary lasa hery iray fiarovana ny tombotsoan’olom-bitsy.
Herim-pamoretana sy biby fampitahorana ny vahoaka ny foloalindahy.
- Ry Miaramila : « miovà ho amin’ny fanavaozana ny saina » dia ny « Fitiavana ny Tanindrazana » sy ny « Fiarovana ny Tombotsoan’ny vahoaka ».
Aiza ny fampanantenana natao ?
- Vary 2.500 fmg/kg
- Menaka 10.000 fmg/l
Nanjavona, vonjy tavan’andro daholo. Inona no anton’izany rehetra izany ?
Fampandriana adrisa fotsiny fa ny tena marina dia natao izay hahavery saina ny vahoaka, raharahan’ny karana sy ny fitondrana ankehitriny izay miara-misôsy amin’ny harem-pirenena no anton’izao fahantrana izao.
- Ny fampidirana ny menaka tsy voadio, ny lafarinina “farine”, sns, dia tsy misy vola miditra ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana na kely aza. Fifanarahana fotsiny amin’ireo karana sy ny fitondrana no misy, izany hoe : ireo karana ireo dia mandoa vola mitentina 12.500.000.000 isam-bolana ho an’ireo mpitondra, izany no zava-misy.
- Manondrana volamena milanja “250 kg” (lingots) isan-kerinandro mankany ivelany ireo karana.
Izany no zava-misy, zary “tantely afa-drakotra ny fanananao ry vahoaka”.
- Nolazain’Ingahy Ratsirahonana, mpanolo-bato-mahamay fa “efa tanteraka ny andraikitry ny tetezamita amin’ny fanatanterahana ny tondrozotra amin’ny apaisement” fa tsy misy gadra politika intsony any “amponja”. Iza moa ireo mbola any “am-ponja ireo”, jiolahy ve? Mpamaky Banky ve? Sa ireo tsy manaiky ny tsy fahamarinana nataon’ity fanjakana misy ankehitriny ity ?
- Ny loza, dia mbola ahitana fanavakavahana ihany koa ny famoahana ireo gadra politika sisa aty am-ponja. Misy votsorana ny sasany, misy mbola tazonina, inona no antony?
Mila fanazavana izany.
Ny Gadra politika